बेरुतमा रहेका सबै नेपाली सुरक्षित छन् : इजिप्टस्थित नेपाली दूतावास – Khabar PatrikaNp
August 5, 2020 141
काठमाडौँ — घरको काम सकेर कोठातर्फ जानुअघि पोखराकी सरु गुरुङले रेस्टुरेन्टमा तीन जनाका लागि खाजा अर्डर गरिन् । गुरुङको साथमा धनगढीकी सोमती तामाङ र संगिता गुरुङ पनि थिए । खाजा अर्डर गरेर रेस्टुरेन्ट बाहिर मात्रै निस्किएकी थिइन्, एक्कासि ड्याम्म ठूलो आवाज आयो । थरर जमिन हल्लियो । भवनको झ्यालबाट सिसाहरु फुटेर बाहिर निस्कियो ।
सिटीको दृश्य तस्बिर : एपीसरुको खुट्टा लगलग काम्न थाल्यो । एकैछिनमा सिसा र बालुवा मिसिएको तुफान आयो । रेस्टुरेन्टभित्रबाट रुँदै कराउँदै मान्छेहरु बाहिर निस्किए । ‘मेरो त हंशले ठाउँ नै छोडिसकेको थियो । हामी तीन जना एउटै भएका थियौं,’ मंगलबार साँझको दृश्य सम्झिँदै गुरुङले टेलिफोनमा भनिन्, ‘सबैको ओठ सुकेको थियो । भागदौड मच्चिन थाल्यो । हामी त एक पाइला पनि अगाडि बढ्न आँटै आएन ।’
पछि बुझ्दै जाँदा उनले थाहा पाइन, उनीहरु रहेको भन्दा ५ मिनेटको दूरीमा रहेको बेरुतको बन्दरगाहामा राखिएको झन्डै २७ सय ५० टनको विस्फोटक पर्दाथ (एमोनियम नाइट्रेट) राखिएको गोदाममा विस्फोट भएको रहेछ । उनी घटनास्थल नजिकै रहेको जापानी नागरिकको घरमा काम गर्थिन् । ‘बन्दरगाहको छेउमै हाम्रो जापानी मालिकको अपार्टमेन्ट थियो । त्यसमा म पार्टटाइमरको रुपमा नियमित काम गर्थें । उनीहरु मंगलबार बिहान जापान गएपछि छुट्टी मिलेको थियो । विस्फोट हुने समयमै मेरो काम पर्दथ्यो,’ उनले भनिन्,‘जापानबाट मेरो मालिक्नीले फोन गरेपछि मात्रै थाहा भयो कि हाम्रो भाग्य बलियो रहेछ । उनीहरु बस्ने फ्ल्याट पूरै ध्वस्त भएछ ।’
बन्दरगाहकै छेउमा रहेको फोर सिजन होटल, फिनिसिया र स्टार कम्पनीमा कार्यरत ३३ जना नेपाली सुरक्षित छन् । फोर सिजनमा कार्यरत रुपेश गिरीले विस्फोटको समयमा होटलभित्रै काम गरिरहेको वबताए । होटलमा १० जना नेपाली काम गर्थे । ‘म र साथीहरु होटलभित्रै काम गरिरहेका थियौं । एक्कासि भएको विस्फोटले होटललाई क्षति पुऱ्यायो तर होटलमा मानवीय क्षति भएन,’ १० वर्षदेखि बेरुतमा कार्यरत गिरीले भने, ‘सबै नेपाली सुरक्षित छौं ।’
उनले समुन्द्री छेउमा भएकोले विस्फोटबाट निस्किएको आधी धक्कामात्रै बेरुततिर आएको र आधा समुन्द्री भागतिर गएको देखिएको बताए । उनको होटलको छेउमै रहेका फिनिसिया होटलमा कार्यरत १५ जना नेपाली पनि सुरक्षित छन् । स्टार कम्पनीमा कार्यरत डिल्ली पौडेलले विस्फोटको समयमा आफूहरु कोठामा पुगिसकेको हुँदा सुरक्षित भएको बताए । ‘विस्फोट हुनुअघि हामी ड्युटी सकेर कोठामा पुगेका थियौं । केही भएन । हामी कार्यरत स्टार कम्पनी व्यावसायिक भवन हो । भवनभित्रका सबै कार्यालयहरुमा क्षति पुगेको छ’, उनले भने,‘विस्फोट भएपछि भवनमा आएर रेखदेख गरिरहेका छौं । जति डर राति नै भयो । अहिले स्थिति सामान्य देखिएको छ ।’
गैरआवासीय नेपाली संघ लेबनानका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले विस्फोटबाट कोही नेपाली पनि घाइते नभएको बताए । ‘बेरुतमा पहिलाजस्तो नेपाली छैनन् । घरेलु कामदारहरु बढीजसो गाउँमै छन् । बन्दरगाहवरिपरि त हामी तीन वटा कम्पनीमा कार्यरत नेपाली मात्रै हौं । अहिले हामी सबै एकअर्काको सम्र्पकमा छौं,’ उनले भने ।
लेबनानको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार विस्फोटमा परी ७८ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने करिब ४ हजार घाइते भएको छ । मृत्यु हुने अधिकांश बन्दरगाहभित्र कार्यरत छन् ।
Prevजनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा भने ५५ प्रतिशतसम्म वृद्धि बेरोजगार बनेका जनताको आम्दानी घटिरहेको
Next२४ घन्टामा १३० जना डिस्चार्ज थप ३८१ जनामा कोरोना संक्रमित
२ बर्षकी नानि रातारात टिकटकमा भाइरल…,हेर्नुहोस् भिडियो
तपाईको यो साता कस्तो छ ? साप्ताहिक राशीफल पढ्नुहोस
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (30969)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (30100)